Xisbiga Kulmiye ma wax u dhiteystay ayuu Maanta, guranaya mise Mucaarad aan kii saafiga aheyn ayaa iskii isagga bilowdaa?
Sunday September 01, 2019 - 08:36:02 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Xukumadda Muusebixi werarku dhinac walba waa kagga socdda. In kasto werarada intooda badani runta iyo xaqiiqda aanay aheyn kuwo u gogol xaadhaya ,hasa yeeshe Dawladnimo waxa sunn,e in Micaaradka saafiga ahi noqdo mid xoog leh oo firfircoonaan iyo xawaare aad ah ku dhaqaaqaya .
Mucaaradka Ka qabiligaah na uu noqdo mid saqirey oo lagga gudbo. Haddise ka qabiligka ahi uu soo sare marro kanna soo talabsado ka Mucaaedka Saafiga ee Sharciga ah halka waxa soo ifbaxaya in aan hanaanka Dawladoodu aheyn mid dhidibo adah ku taagan .
Tusaale ahaan hadda ka Xukummda Muuse ku socda waa mid aan aheyn Mucaarad saafi ah balse ah mid Mucaarad qabili ah . Waa jirran sabab badan oo Xukumada Muuse hogaaminaayo loo dhaliil karro ayna ugu horeyan Xukumadda uu soo dhisay oo aan aheyn mid Ummadda qancisay marka la eego tayadeed ,loona sii eego Aqoonta iyo waayo-aragnimo iyo xagga dheeli tirka ba iyo Shikhsyaadka uu doratay ba .
Sidda oo kale iyadduna waa jiraan waxyaabo badan oo la filayey in Xukumadda cusub ee Muuse ka soo baxdo , iyagga aan wali u dhaqaaqin sidda Golaha Wakiilada doorashadooda ,oo kale oo lagga yaaba in halka kaar iyo howl badani kagga hadhi lahayd oo Maanta wali sugeyso qabashadeed iyo ka soo bixideedu.
Waxa kaleoo Xukumada Muuse ay noqotay mid ku dhaqaaqaysa waxyaabo dhibaato u keeni karra Qaranka halkaanna dhawac helis ka soo gaadhi karro si fudud ah waa meelaha lagga dhaliili karro mar kale ,Tusaale aynu u soo qaadano kuwii igu danbeeyey sidda Taliyaha Ciimadda Qaranka u hadlay dhowr cisho ka hor oo fajiciso ku noqotay Ummadda Dalka gudihisa iyo debbadiisa walina aan Xukumada muuse waxa ay kagga jawaab gelisay arinka yaabkiisa,! laaha aaney jirin taasina waa dhibaatooyinka Xukumadu ayada horseedka ka tahay isla markaan is tusayso inay sidda ku Saxan tahay iyaddo ogsoon inay khalad oo badheedha u yahay hadalka Taliyahu la wadaagay Ummada.
Mucaaradka qabiligaahinna, ma ah mid iska yimi ee waa kii Xisbiga Kulimiye u sahlay inuu Hogaanka dalka labba jeer uu hanto in kasto la odhan karro waa uu ka duwan kii Xisbiga kulimiye ku soo koray Hogaanka Dalka ka ay hadda ay wajahyaan isla XIsbiga kulmiye Xukumadiisa Maanta .
Waxa yabahaay kagga duwanaayeen waxa ka mid ahaa Oday dhaqameedu waxa uu mid aan xoog baddan iyo Muuqa badan lahayn isla mar ahaantanna iyaggo wata xamaasaddii qabiliga ah ee Daahir Riyaale, lagga tuurayey hogaanka wadan ka haddanna ay lahayeen jaheeya yaal Siyaasadeedo oo hadal-cudoon iyo Khudbado cudoon fagaarasha ka la linjiray . Halka Maanta Mucaaradk Saafiga hadalkiisa iyo aragtidiisa ay tahay mid aan sidda wax badan Ummadda uga dhaadhicin karrin laakiin Odayaasha iyo Nin Qabiligu ay ka cod iyo misaan weyn yihiin.
Ma la Kulimiyewaxa uu dhigtu dhuranaya Maanta ? Mise Mucaaradka Saafi ah ayaan ahayn kuwo soo bixi karrin kaalmihi looga baahana ee Mucaaradnimo sidda Aqoonteed Kartidii, iyo Xirfadee iyo howl-gelida xaldaha dhabta ah ee Qaranku Wakhtigan xaadirka ah ku sguan yahya sidda awgeed ayaa odaysha ka soo kicisay isla markaan ma waxay ka fursan weyday inay isu tagaane Kadinka hore, ku Mucaraadnimada.
Kolay waxuun ba jira marka lagga taggo dhibaatooyinka kale inoo gaar ay ka mid yihiin kuwa ka jira Dalka gudihisa ee inta badan iminka jira ilaa iminkan wali xal kamma danbeysa ah aan lahayn balse wali aan lagga daalin xal u helida dhibaatada iyo waxyeeladeed mid nafeed iyo mid maalba.
Gebbo gebbad iyo Gunaanadk.
Dawladnimadaiyo jiritaankeedu waxa uu ku waangadn yahay kunna qurxoon yahay ayaddo la fuliyo loona hogaamsamo Qisdiga Dastuurka iyo ku dhaqankiisa.
Halkaan Wadadkaliya ee Xukumad lagula xisaabtamaayo amma lagu bedelaya noqdo Qisdiga iyo Qadiyada Mucaaradnimada Saafiga ah ee Dastuurka Qaranku ogol yahay. Si taa loo adkeeya loona fuliyo waa in qadiyada Mucaaradnimada Saafiga ah la xoojiya laysla na garab taaga tallo, Dhaqaale taageero . Sidda loogu howl gallo Mucaaradka saafiga ah ,Xukumadda joogta Maanta loogu bedeli lahaa Xukumad kale oo ka firfircoon kanna dhega nugul kanna kanna xilkas ah.
Sidda aynu Aqoonsanahay Mucaarad rukunkiisu yahay Qabili Qaranka ma dhisi karro meel ma gaadhsiin karro si kast oo xoog iyo u quwad badan yahay waxa uun ka hot imanaya mid kale qabili ah halkaan waxa dhaawac soo gadhaya Qaranka oo kala qaybsanaan iyo kala tafararuq uu yahay lama huraan.
Haddii aynuwanaag iyo qaninimo Mucaaradka qabiliga ah iyo ka Reer naf iyo milgo ku ognahay waxa Jamhuuriyada Somaliland ahaan ma aynaan isku howleen Dastuurka iyo hirgdlintiisa iyo hanaanka Xusbiyada badan aynu qaaadanay ee waxa aynu ku ku dhaqmi lahayn ka qabiliga
Maanta waxa inala gudboon ilaalinta milgaha Qarannimada Dawladnimada iyo sharafka Ummada ahanteeda waxa badan oo wanaagsan ayaa aynu haya ee inta kale inaga khaldan aynu wanaag iyo Mucaaradnimada Saafiga ah aynu ku doono waa gaadhi doon haddii rabi idmo, ee.
Aragtida xor ta ah ee Muwaadinka .